घरमा खाना पकाउने महिला, तर खाने पालो किन अन्तिममा ? यसो भन्छन् विज्ञ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
घरमा खाना पकाउने महिला, तर खाने पालो किन अन्तिममा ? यसो भन्छन् विज्ञ
तपाईँको घर वा छिमेकमा परिवारका अन्य सदस्यले खाना खाइसकेपछि अन्तिममा मात्र बुहारीले खाने चलन छ ? कैयौँ घर परिवारमा त्यस्तो परम्परा जीवित पाइन्छ। तर विज्ञहरू भन्छन्, त्यसको असर बुहारीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्छ।
उनी भन्छिन्, खाना पहिले खायो भने बुहारीको यो बानी राम्राे होइन भन्थे। खाना सकियो भने खाना पकाउन अल्छी लाग्छ अनि त्यत्तिकै ओछ्यानमा सुत्छु, पेटमा हात राख्यो सुत्यो।
समाजमा अझै पनि प्रायस् बुहारीले खाना पकाउने, पस्किने र परिवारका सबै सदस्यलाई खुवाएपछि मात्र खाने चलन छ।
त्यस्तो चलनले समाजमा महिला र पुरुषको स्थानमा रहेको विभेद छर्लङ पारेको बताउँदै उनी भन्छिन्, यसले छोरालाई प्राथमिकता दिएको प्रस्ट देखिन्छ। बुहारी भनेको बाहिरबाट आएकी हुन् भन्ने बुझाइले नै यो चलन आएको हो। परिवारमा जसको शक्ति र महत्त्व धेरै हुन्छ, त्यसैले हो पहिला खान पाउने।
प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार मीठो मसिनो पाकेको दिन परिवारका सदस्यले अघि पछि भन्दा धेरै खाइदिँदा अन्तिममा खानेलाई अपुग हुने गरेको कैयौँ महिलाहले भोगेको पाइन्छ, उनीहरुले घरभित्रका कुरा इज्जतुका निम्ति बाहिर नल्याएका मात्र हुन्।
पोषणविद् डा। अरुणा उप्रेतीका अनुसार त्यसले महिलाको स्वास्थ्यमा निकै असर पारेको छ।
उनी भन्छिन्, आज, भोलि र पर्सि गर्दै लगातार खाना कम भयो भने यसले पोषणको समस्या त ल्याउँछ। साथै समयमै खाना नपाउँदा पेटमा घाउ (अल्सर) हुन सक्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या गर्भवती महिलामा देखिन्छ, यसले आमा र गर्भमा रहेका दुवैलाई प्रभावित पार्छ।
हेर्दा सामान्य लागे पनि पाकेको खाना पहिला खान पाउने वा पछि खानुपर्ने चलनले कतिपयको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पारेको देखिएको डा। उप्रेतीको भनाइ छ।
भोक लागेको छ, खाना पनि छ, तर सबैले नखाइ मैले खान पाउँदिनँ भन्ने सोचका कारण महिलाहरूमा हीनताको भवना उत्पन्न हुन्छ र आत्मविश्वास घट्न थाल्छ, डा। उप्रेती भन्छिन्, त्यसले महिलाको मानसिक स्वास्थमा प्रभाव पार्छ र हीनताबोधले गर्दा उनले पछि गएर क्षमता भएको काम पनि गरेर देखाउन सक्दिनन्।
उनी भन्छिन्, कमाउन जाने बुहारीको हकमा यो चलन अलि खुकुलो भएको देखिन्छ। उनीहरू पहिला खाएर काममा जान पाएको देखिन्छ। यस्तै एकल परिवारमा सबैजना सँगै बसेर खान थालेका छन्।
यसको अन्त्यका निम्ति सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट चेतानमूलक हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। /बीबीसी नेपालीवाट